भाडाको कोठाभन्दा सस्तो लज ! डेरा लिँदा महिनामा १० हजार, लजमा सुत्दा प्रतिरात १५० — SuchanaKendra.Com
भाडाको कोठाभन्दा सस्तो लज ! डेरा लिँदा महिनामा १० हजार, लजमा सुत्दा प्रतिरात १५०
सवारी चालक इन्द्र श्रेष्ठको यहाँ न घर छ, न त डेरा तर उनको बसाइ र सुताइ आरामदायी नै छ । श्रेष्ठका अनुसार उनको बसाइ भोटेबहालको लजमै हो । डेरा लिँदा महिनामा १० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ तर लजमा सुत्दा प्रतिरात १५० रुपियाँ तिरे पुग्छ । खाना पनि लजमै सस्तोमा पाइन्छ । नुहाउन पानी पाइन्छ । शौचालय व्यवस्थित मिल्छ ।
डेरा कोठामा जस्तो पानी नपाइने, अप्ठ्यारो शौचालय र खाना पकाउने टन्टा भएन । ‘यति सुविधा हुँदाहुँदै टन्टा कसले बोकोस् ?’, श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसो त काठमाण्डुका भोटेबहाल, गणबहाल र सहरका यत्रतत्र लजमा एउटै कोठामा छ बेडको व्यवस्था हुन्छ ।
छ बेडमा १२ जना मिलेर सुत्ने र आधाआधा पैसा उठाएर लजलाई तिर्ने, निरन्तर लजमा सुत्नेलाई त लज सञ्चालकले छुट दिँदा झनै फाइदा हुने श्रेष्ठको अनुभव छ । गोरखापत्र दैनिकबाट